स्वास्थ्य Archives – Satabdi News
नन्दराज राई बचाउ अभियनमा दक्षिण कोरियाबाट २ लाख, ५ सय ८ रुपैया सहयोग
२३ फाल्गुन, मोरङ । मोरङ जिल्ला बेलबारी नगरपालिका वाड नं.-१० भाउन्ने बस्ने स्व. सबत बहादुर राई र सन्चु माया राईको छोरा नन्दराज राईको दुबै मृगौला फेल भई किष्ट कलेज र शिक्षण अस्पताल काठमांडौमा उपचार भईरहेको छ । उपचार गर्न रकम अभाबको कारण जीवनमरणको दोसाँधमा रहेको छ । उपचारमा आर्थिक अभावकै
१६ फागुन, दमक । मोतिविन्दु भएका ५३ जनाको दमक ६ स्थित मेची नेत्रालयले निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको छ । मातृका आई फाउण्डेसन काठमाडौंसँगको सहकार्यमा नेत्रालयले शनिबार दमक र आसपास क्षेत्रका बिरामीहरुको लागि निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको हो । यसअघि नेत्रालयले निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेको थियो । नेत्रालयले दमक नगरपालिका ९, चुलाचुली
१७ माघ, काठमाडौ । चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा पहिला दुग्धजन्य पदार्थहरुलाई आफ्नो भोजनबाट टाढा राख्नुहोला ।
३० पुस, काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्न थालेको छ । पुस मध्यदेखि संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिन थालेको हो । छिमेकी भारतमा पनि उच्चदरमा बढेकाले खुला सिमानाको थप प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै चिकित्सकहरुले सजग गराएका छन् । यसैक्रममा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ हजार ८७ जनामा कोरोना संक्रमण
१७ मंसिर, काठमाडौ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमण भारतमा पनि पुष्टि भएको छ । भारतको कर्नाटक राज्यका २ जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको अधिकारीहरूले बिहीबार जानकारी दिएका छन् । एक जना ४६ वर्षीय र अर्का एक जना ६६ वर्षीय पुरुषमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक
१६ मंसिर, काठमाडौ । जापानले ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण एयरलाइन्सहरूलाई नयाँ आगमन उडानका बुकिङहरू रद्द गर्न भनेको छ । जापान प्रवेश गरेका केही व्यक्तिमा भाइरस पुष्टि भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । ‘हामीले डिसेम्बर १ देखि एक महिनाका लागि सबै नयाँ आगमन उडान रिजर्भेसन रोक्न एयरलाइन्सहरूलाई आग्रह गरेका छौं’, जापानको यातायात
१५ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमण नगर्न अपिल गरेको छ । कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमण नगर्न तथा सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले अपिल गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले नेपालमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमण